ပိုကောင်းသော Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြု | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြု Remastered Edition ကိုသတ်မှတ်ရန်ဇန်နဝါရီလ 2020 အတွက်လွှတ်ပေးရန်
Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြု Remastered Edition ကိုသတ်မှတ်ရန်ဇန်နဝါရီလ 2020 APK ကိုအတွက်လွှတ်ပေးရန်
အဆိုပါအသုံးပြုသူများက Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြုဒ Remastered Edition ကို၏ကို Nintendo Switch အကြောင်းအစိုင်အခဲလွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲတယ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ 23 မှသင်၏လက်ပေါ်မှာရဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်rd ဇန်နဝါရီလ 2020 ။ တိုကျိုဂိမ်းပြရန်ရင်ပြင် Enix အဓိကဖြစ်ရပ်မတိုင်မီ၎င်း၏ဂိမ်းအကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်နောက်တွဲယာဉ်မျှဝေပါလိမ့်မည်ဒီရက်သတ္တပတ်သတင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်ဤသတင်းကိုစစ်ဆေးလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါဂိမ်း Cross-ကစား, (လေးကစားသမားများအများဆုံးအထိ) အသစ်များကိုအွန်လိုင်း multiplayer mode ကို, အသံ-over နှင့်အတူသစ်ကိုဇာတ်ကောင်များနှင့်အများအပြားပိုပြီးပါဝင်သည်။
သင်ဤဂိမ်းတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်မဟုတ်လျှင်သင်နှစ်တွင် 2004 အတွက်စတင်နာမည်ကျော်ဂန္ GameCube တစ်ဦးဇာတ်ကားဖြစ်နိုင်ပါတယ်သော remastered လွှတ်ပေးရန်, အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကစားသမားလောင်စာ crystals အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့်က "မုရန်" ကိုရှာသည်ကမ္ဘာ့အနှံ့သွားလာရန်ရှိသည်။ ဒါကအဆိပ်အပြင်းဆုံး Miasma ထံမှတစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအခြေချနေထိုင်ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ အိမ်ရွာကနေစတင်ပါရန်, အရေးပါသောဇာတ်ကောင်သစ်ပင်များနှုန်းနေရာချထားဖို့ခရီးအဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကသူတို့လမ်းကြောင်းကိုတစ်လျှောက်လုံးလောင်စာဆီနှင့်အခြားရှာဖွေစူးစမ်းထောင်ထဲအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြု - နယူးအင်္ဂါရပ်များ
အဆိုပါ Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြု Remastered Edition ကိုမိတ်ဆက်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များစာရင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှာတွေ့ပေးပါ:
နယူး Boss & ထောင်ထဲက - သူဌေးကနှင့်အသစ်ထောင်ထဲစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့ကိုလည်းဂိမ်းနှင့်အတူထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤသည်ကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ပျော်စရာဂိမ်းအခွင့်အလမ်းများရှိခြင်းခွင့်ပြုပါတယ်။
နယူးပစ္စည်းများနှင့်က Character Appearances - သင်တစ်ခုလုံးကိုမှော်ခရီးတစ်လျှောက်လုံးအသုံးချမှအပိုငျးအများနှင့်အသစ်စက်စက်ရူပနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
နယူးအွန်လိုင်း Multi-player ကို -4ကစားသမားဦးရေအများဆုံးအထိကစားသူအများအပြား mode ကိုကစားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤလောက၏အတွင်းထောင်ထဲနှင့်အန္တရာယ်ရှိနဂါးကိုကျော်လွှားဖို့,3ပိုပြီးကစားသမား (မိတ်ဆွေများက) ဖြင့်အွန်လိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ၏ remastered ထုတ်ဝေပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ Final Fantasy crystal ရာဇဝငျခြုမရှိကစားသမားကျန်ရစ်ရပါမည်ကိုလည်းကအကောင်းဆုံး Cross-ကစားလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထောက်ခံပါတယ်။
နယူးက Character နောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့ - တွေအတွက် Playable သူရဲကောင်းများသူတို့ရဲ့အသစ်စက်စက်နောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့တခုအဖြစ်မှဘဝအတွင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကလည်းကြမ်းကြုတ်မိကျောင်းနှင့်သွန်းစာလုံးပေါင်းစစ်ချီ။
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်အသံနှင့်အမြင် - သင်မြောက်မြားစွာသစ်ကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့အတူ FFCC (Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြု) ကမ္ဘာတွင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ အသံနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်အဆင့်မြှင့်ဂရပ်ဖစ်အဆိုပါဂိမ်းစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့မှော်စွန့်စားမှုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြုဂိမ်း Play စ
FFCC (Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြု) သည်အကောင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးအရေးယူ-based အခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီဂိမ်းမှာတော့ကစားသမားမုရန်အမည်ရှိနှုန်းသစ်ပင်များကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျင်လည်ကျက်သူစွန့်စားမယ့်အုပ်စုတစ်စု၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်အဖြစ်က၎င်း၏ဇာတ်လမ်းတိုးသောထပ်တလဲလဲဖြစ်ရပ်စီးရီးလုပ်ဆောင်ရန်ကစားသမားများကပဲ့ထိန်းသည်။
အဆိုပါနေထိုင်သစ်ပင်များအတွင်းအန္တရာယ်ရှိသည်ထောင်ထဲက Explore ။
အဆိုပါ Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြုအတွင်းရရှိနိုင်တစ်ခုလုံးကိုဂိမ်းက၎င်း၏ Ivalice မဟာမိတ်အဖွဲ့စီမံကိန်းကိုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောကာလမှာအတူတူပင်ကမ္ဘာကြီးအတွင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Crystal ရာဇဝငျခြုဝဠာလေးပါးအမြိုးအနှယျအတွင်းပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအဆိုပါအရေးအပါဆုံးနှင့်အဓိကရှုထောင့် Lilties, Yuke, Selkie နှင့် Clavat ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တမူထူးခြားတဲ့စရိုက်လက္ခဏာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်အတူအသုံးပြုသွားမည်နေကြသည်။ နောက်ထပ်အသုံးအများဆုံးသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့အတွက် FF Carbuncle စီးရီးထဲကနေခေါ်သောကြောင့်အပျေါအခွခေံသော Carbuncles အဖြစ်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီးရီးပေါင်းများစွာထပ်တလဲလဲဇာတ်ကောင်ပါဝင်သည်။ နယ်လှည့် Moogle (Stiltzkin) တိုင်းရက်စွဲကိုအရစ်ကျအတွင်းပေါ်လာပါလိမ့်မည်သည့်တစ်ဦးတည်းသာဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Lich တစ်သူဌေးနှင့်ဇာတ်ကောင်နှစ်ဦးစလုံးမှပတ်သတ်ပြီးအနည်းငယ်ပိုပြီးပွဲဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Alfitaria, မြစ် Belle Path ကို, Rebene Te Ra နှင့် Kilanda ကျွန်းများအဖြစ်လေးကွဲပြားခြားနားသောထပ်တလဲလဲတည်နေရာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဓိက Final Fantasy စီးရီးပတ်သတ်ပြီးနှင့်တကွ, All-အသစ်က Crystal ရာဇဝငျခြုဂိမ်း multiplayer-based နှင့်လည်းပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်အနေဖြင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားပါသည်။ Moogle Paint ကစားသမား Moogle ပန်းချီကားများ၏ရွေးချယ်မှုများအသုံးချနိုင်သည့်အတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ထပ်တလဲလဲ Mini-ဂိမ်းထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြု Remastered ၏ထပ်တလဲလဲ Themes
အဆိုပါ FF ပုံပြင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟာ Crystal သူ့ဟာသူကိုဗဟိုပြု Crystal ရာဇဝင်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါ Crystal ရာဇဝငျခြုအတွင်းမှာပဲမဟာ Crystal အရိပ်အလိုအလျောက် Miasma စောငျ့ရှောကျဖို့လူတိုင်းအတွက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည်။ ကံကြမ္မာဒါမှမဟုတ် Hierophant Galdes ၏ Ring ကို (အဓိကရန်) မဟာ Crystal ပါဝါရဖို့ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ crystals ကလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့သည် Chelinka, သူမ၏အသက်နှင့်လည်းသူမ၏အစ်ကို့ Yuri အတွင်းအရေးအပါဆုံးအခန်းကဏ္ဍအသုံးချရန်။
သင်၏အသက်တာအတွင်းမှာပဲဘုရင်သူ၏နိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးရန် Architek ပါဝါများကိုဘုရင်ကလီယိုနှင့်အတူမဟာ Crystal ဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါရွာသားများသည်အချိန်ပဲ့တင်သံတွေအားဖြင့်ရွာသူရဲကောင်းနေကြရသော crystals ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘုံအတွင်းနေရာချပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Crystal ဆောင်လုလင်, သူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုတစ်သက်တာရှယ်ယာလေးပါး crystals ကိုယ်စားပြုတစ်ဦးချင်းစီအနွယ်စဉ်အတွင်း။ အဆိုပါ Yuke Crystal လုံးဝ Yukes ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ဖျက်ဆီးခံရလျှင်။
မိသားစု - အရေးကြီးအခန်းကဏ္ဍ (ပင်မဇာတ်ကောင်)
အဆိုပါ Crystal ရာဇဝငျခြုဂိမ်းအတွင်းမှာပဲဇာတ်ကောင်ဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကနေအများအပြားအက္ခရာများကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကစားသမားဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကနေလက်ခံရရှိရန်လက်ဆောင်တွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုရဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအက္ခရာများတုံ့ပြန်ရန်မေတ္တာရပ်ခံထားပါသည်။ ကံကြမ္မာ၏ Ring ကို, ဒီဇာတ်လမ်းကိုညီမနှင့်အစ်ကို, Chelinka & Yuri အကြားအရေးကြီးသောဆက်ဆံရေးမျိုးန်းကျင်လှုံ့ဆော်ပေး။
အဆိုပါအကြှနျုပျ၏ရှငျဘုရငျဘဝက, ဒီဇာတ်လမ်းကိုသူ့ဖခင်ဘုရင် Epitav (ယခင်ဘုရင်က) ဖြင့်ဘုရင်ကလီယိုရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအကြောင်းကိုအကြောင်းကြား။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုများနှင့်အတူဆက်ဆံရေးနိုင်ငံသားတွေကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် Padarak ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်အများကြီးပိုလွယ်သည်။ အချိန်ပဲ့တင်သံတွေအတွင်းမှာပဲနာမည်ကျော်သူရဲကောင်းဟာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် Sherlotta နဲ့ရငျးနှီးတဲ့-ဖှဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်နှင့်လည်းတစ်ခုလုံးကိုရွာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူသင့်ပါတယ်။
အမှတ်တရများ - ထိုပုံပြင်အတွင်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ
Crystal Chronicle ရဲ့ဂိမ်းမှာတော့ဇာတ်ကောင်အများစုကသူတို့အမှတ်တရများကြီးမားတုံးဆုံးရှုံးဖို့စတင်ပါသို့မဟုတ် Black Knight နဲ့တူမြောက်မြားစွာသောအရာတို့ကိုမေ့လျော့ကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်း (ကံကြမ္မာ၏ Ring ကို), Chelinka & Yuri ဟာသူတို့ရဲ့အတိတ်အမှတ်တရတွေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့အဘ၏ဝိညာဉျသအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ရှိသည်။ ကြှနျုပျ၏ရှငျဘုရငျဘဝပုံပြင်, ထိုအဆောက်အဦးသည်သူ၏အဟောင်းများကိုနိုငျငံတျောသညျအကွောငျးကိုဘုရင်ကလီယိုရဲ့အမှတ်တရများကို အသုံးပြု. Architek နှင့်အတူဖန်တီးနေကြသည်။
သူတစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးခဲ့သောအဆောက်အဦးများ, အများစုဟာ, ဟောင်းဇာတိမြေနှင့် Moogle ညီအစျကို၏အဟောင်းများကိုအမှတ်တရများကို အသုံးပြု. အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြသည်။ Sherlotta သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းထုတ်ဖော်ပြသနေစဉ်အချိန်ဇာတ်လမ်း၏ပဲ့တင်သံတွေ, ထိုသူရဲကောင်းများ၏ flashbacks (ဟောင်းအမှတ်တရများ) အလိုအလျောက်ရေကူးကန်အတွင်းကြည်လင်အပိုင်းအစနေရာပါလိမ့်မယ်။
တွေအတွက် Playable အမျိုးအနွယ်
လည်းလေးကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအနွယ်သို့မဟုတ်အက္ခရာအတန်းအဖြစ်ရည်ညွှန်း။ အဆိုပါဇာတ်ကောင်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးချင်းစီကစားသမားသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးတဦးတည်းရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အားသာချက်ရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအပြေးပြိုင်ပွဲတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကျန်ရှိလေးကစားသမားများနှင့်အတူကစားရန်လူတိုင်းအတွက်စံပြဂိမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးသောကောင်းစွာ-မျှတတဲ့ပါတီကအပေါ်သို့ဆွဲရလိမ့်မည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလေးအနွယ်တို့ဖြစ်ကြသည်:
Selkies လေ့ပု Clavats ထံမှကွဲပြားခြားနားသောသူအချို့ထူးခြားတဲ့ features တွေ, ပါဝငျသောလူသားတစ်ဦး-ရှာဖွေနေပြိုင်ပွဲအဖြစ်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကငွေရောင်-အပြာဆံပင်ရှိသည်နှင့်သူတို့မျိုးနွယ်၏အထွတ်အထိပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကအစဉ်အလာသူခိုးအဖြစ်လူသိများနှင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ဒုံးပျံကဲ့သို့လက်နက်အသုံးပြုမှုကိုလုပ်နေကြသည်။ သူတို့ရဲ့မြန်နှုန်းနှငျ့ ပတျသကျ. Selkies တာဝန်ခံအချိန်နှင့်ခိုင်ခံ့သောတိုက်ခိုက်နေပါဝါတိုက်ခိုက်ခြင်းတစ်ဦးကိုတိုစေအာရုံစိုက်ရှိသည်။ Selkies အဆိုပါ Leuda ကျွန်းမြို့အတွင်းဖြည့်ကြပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြိုင်ပွဲပိုင်မနိုင်ပါတယ်အလွယ်တကူလုယက်မည်သူမဆို။
Yukes လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သတ္တဝါများနှင့်အများအားဖြင့်အရပ်ရှည်ရှည်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအသွင်သဏ္ဌာန်အတွက် humanoid တူသောပေါ်လာနှင့်သူတို့၏ခေါင်းများဖုံးလွှမ်းရန်ခမောက်ကိုသုံးပါ။ အပြင်, သူတို့ကအဖြစ်ကောင်းစွာ၎င်းတို့၏နောက်ဘက်ခြမ်းမှာအတောင်အစုတခုရှိလုပ်ပါ။ စစ်တိုက်ခြင်းငှါစဉ်အတွင်းသူတို့သံတူကိုင်စွဲနှင့်ခဲနိမ့်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုနှင့်အမြင့်ဆုံးမှော်နှင့်အတူစာလုံးပေါင်းကျော်အသုံးချကိုအသုံးပြုပါ။
သို့သော်သူတို့၏အာရုံတိုက်ခိုက်မှုအားသွင်းဖို့အချိန်အများကြီးယူလိမ့်မည်နှင့်အစဉ်အလာဝိဇ်ဇာဆရာတို့သို့မဟုတ်ပညာရှင်များအဖြစ်လူသိများကြသည်။ အဆိုပါ Yukes အများစုမှာ Shella မြို့ (Veo လူးပြည်နယ်), အစွမ်းထက်မှော်ဖြင့်ကာကွယ်ထားနှင့်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကြသောမြို့အတွင်းနေထိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Lilties တစ်ခုခုလည်ဆံ, leafy ဆံပင်, ရဲရငျ့စှာပွောလူများ, နီအမွေးများနှင့်အတူရေတိုအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့စစ်တိုက်လက်နက်အဖြစ်လှံနဲ့ Don စိန်ခေါ်ကိုင်စွဲအသုံးချ။ သူတို့ကအစအစဉ်အလာကြီးသောသူနှင့်မအဆိုးဆုံးမှော်တန်ခိုးနှင့်အမြင့်မားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတန်ခိုးနှင့် casters စာလုံးပေါင်းဖြစ်ကြသည်။
မြောက်မြားစွာဇာတ်ကောင်ဟာ Lilties အချိန်သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကနဂါးရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုကနေသူတို့ရဲ့လူတွေကိုစောငျ့ရှောကျဖို့အစွမ်းထက်အစိုင်အခဲကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏အကာအကွယ်မြေယာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါ။ Lilties များသောအားဖြင့် Alfitaria အတွက်အသက်ရှင်ရန်အကြီးဆုံးမြို့အတွင်းနေထိုင်ကြသည်။ အဆိုပါ Alfitaria နှင့် Marr ရဲ့ Pass ကိုနှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ခရီး Lilties ၏အကူအညီဖြင့်ဖွဲ့စည်းရပါလိမ့်မယ်။
Clavats လူသားအလားတူနှင့်သဘာဝအားဖြင့်အလွန်ငြိမ်းချမ်းသောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအစဉ်အလာလည်းလယ်သမားဖြစ်ကြောင်းနှင့်စစ်တိုက် (တိုက်ခိုက်ရေး) စဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးဒိုင်း & ဓားကိုအသုံးချရန်။ သူတို့ကအစွမ်းထက်မှော်-သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်အပြင်းထန်ဆုံးကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Clavat အသိုင်းအဝိုင်းအကြီးအကျယ် Fum လယ်ကွင်း (ထို Jegon မြစ်၏အနောက်ဘက်အခြမ်း) အတွင်းအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Fum ယာဉ်တန်းလေး Clavats ၏အကူအညီဖြင့်ဒီဇိုင်းနှင့်နေသူများကဖန်တီး။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လယ်ယာမြေရဲ့ကြည်လင်ပြန်ရရန်မုရန်စုဆောင်းနိုင်ရန်အတွက်ကွာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလယ်ယာမြေကနေကျင်လည်ကျက်ဖို့ပိုနှစ်သက်။
နောက်ဆုံး Fantasy Crystal Final Fantasy Crystal ရာဇဝင် Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြု Remastered